केहि आधारभूत gauges वा प्रभाव हराइरहेको छ। मैले के गर्नु पर्छ? - Rikoooo
केही मूल कुराहरू गेज वा प्रभाव हराइरहेका छन्। म के गर्नुपर्छ?
संशोधनहरू धेरै भएको «गेज» फोल्डरमा गरेका छन्, यो आधार फाइलहरू एक भाग हराइरहेका छन् कि बारम्बार छ। त्यस अवस्थामा, एड-मा आवश्यकता फाइलहरू theses भने, यो प्यानल मा गेज प्रदर्शन गर्न सक्षम हुने छैन। अक्सर समाधान FSX पुनर्स्थापित मा हुन्छन्। FSX पुनर्स्थापित जोगिन गर्न, तपाईं डाउनलोड गर्न सक्छन् पुन: प्राप्त गेज, जो Rikoooo द्वारा सिर्जना अलि कार्यक्रमबाट «गेज» र «प्रभाव» फोल्डरहरू हरेक मूल फाइल पुनर्स्थापना हुनेछ भन्ने छ।
अपडेट 13 / 02 / 2014: एक Prepar3d संस्करण सिर्जना भइरहेको छ।